Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Aotrisy » Nanipy ny satrony tao amin'ny peratra sekretera jeneralin'ny UNWTO ny masoivohon'i Kolombia any Austria
Ny masoivohon'i Kolombia any Austria, Hon. Jaime Alberto Cabal, no mpilatsaka hofidina farany ho sekretera jeneralin'ny UNWTO. Ity dia kopian'ny resadresaka ifanaovan'ny tafatafa navoakan'ny eTN Publisher Juergen Steinmetz.
Steinmetz: tara vao niditra ny hazakazaka ianao. Nisy ve antony tokony hihazonana izany? Inona no nahatonga ny fanapaha-kevitrao hiditra amin'ny fikarohana efa be dia be ho an'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO vaovao?
Cabal: Ny fizotry ny famaritana ny filatsahan-kofidina dia tsy hoe misy ifandraisany amin'ny tombontsoany manokana fa eo amin'ny fanapahan-kevitry ny firenena iray ihany koa. Raha ny momba an'i Kolombia dia samy te handray fanapahan-kevitra ny filohan'ny Repoblika na ny minisitry ny raharaham-bahiny miankina amin'ny fahafaha-voafidy sy amin'ny fahaiza-manao takiana amin'ny filatsahako. Heveriko fa ireo nanolotra ny firotsahany hofidina aloha dia mety manana tombony manokana fa ny ho tonga aloha dia tsy midika hoe manompo aloha. Heveriko fa ny programa, ny tolo-kevitra ary ny mombamomba ny kandidà dia mitana andraikitra lehibe.
Steinmetz: Inona no mampiavaka anao amin'ny kandidà hafa?
Cabal: Tsy misy isalasalana fa tena hajaiko sy omeko lanja tokoa ny asan'ny kandidà Breziliana ary koa ny mpilatsaka hofidina ho sekretera Ad Hoc amin'ny fiaraha-miasa amin'ny kandidà Koreana fa raha ny fahitako azy dia miankina amin'ny fisian'ireo kandidà ireo dia mitohy. Araka ny fomban-drazana, ao amin'ny UNWTO ireo faharoa dia maniry mafy na voafidy ho sekretera jeneraly ary ny tolo-kevitra izay ataonay dia mifantoka amin'ny fanavaozana. Amin'ity tranga ity dia maniry izahay hanana mpirotsaka hofidina amerikana latinina izay manome aingam-panahy an'ity dingana ity izay arosonay ho an'ny UNWTO.
Steinmetz: Inona no hataonao very sy tsy mpikambana ao amin'ny UNWTO. Ohatra ny Etazonia sa UK?
Cabal: Iray amin'ireo tolo-kevitra lehibe ny fangatahana fitomboan'ny firenena mpikambana sy ny mpikambana ao amin'ny Affiliate; Firenena mpikambana izay mbola tsy nandray anjara na Fanjakana efa mpikambana ao amin'ny Organisation fa lasa. Raha dinihintsika ireo firenena mpikambana izay ao anatin'ny Organisation, firenena 156 ankehitriny, dia hitantsika fa misy mpikambana kely kely kokoa raha oharina amin'ny isan'ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana miasa any Genève, New York na Viena. Eto amin'ity fikambanana ity dia malahelo firenena 50 eo ho eo isika izay mety ho mpikambana ao amin'ny UNWTO. Zava-dehibe ny fananan'ny firenena toa an'i UK, Etazonia na ny firenena Nordic sy ny hafa ho lasa anisan'ny fikambanana. Noho izany, amin'ny fahitako azy dia tsy maintsy misy tolotra lehibe kokoa azo tsapain-tanana sy mivaingana azo tsapain-tanana kokoa ho an'ny Fanjakana Mpikambana ary paikady misy diplaomasia betsaka hisarihana na hanasana ireo firenena ireo ho tonga ao amin'ny Organisation. Tsy misy isalasalana fa ity dia iray amin'ireo tetik'asa lehibe tiako hapetraka.
Steinmetz: WTTC sy UNWTO dia niasa toy ny zaza kambana siamese. WTTC sy UNWTO dia niasa toy ny zaza kambana siamese. Na izany aza WTTC dia misolo tena orinasa 100 fotsiny. Mazava ho azy fa ny PATA sy ny ETOA dia nilalao ihany koa tao anatin'ny hetsika UNWTO. Ahoana ny fomba hampidiranao olona misimisy kokoa ny mpandray anjara amin'ny sehatra tsy miankina?
Cabal: Iray amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'ny UNWTO ao anatin'ny rafitry ny Firenena Mikambana satria io no hany fikambanana izay misy ny sehatra tsy miankina amin'ny maha-mpikambana ao aminy amin'ny alàlan'ny sokajin'ny mpikambana afiliana. Ny fikambanana dia tokony hampiasa tsara kokoa an'io fepetra io. Mitovy amin'ny fiarahan'ny Organisation miasa akaiky amin'ireo mpikambana ao aminy mpikambana, dia tokony hiara-hiasa akaiky amin'ny sehatra tsy miankina mitady tombontsoa amin'ny heriny, ny fahaizany ary ny fahalalany koa eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Amin'ity lafiny ity dia mikasa ny hanome lanja lehibe kokoa ny fampidirana mpikambana vaovao ao amin'ny Affiliate aho ary andraikitra lehibe ho an'ireo izay efa ao anatin'ny Organisation. Ankasitrahako ihany koa ny anjara asa sy tanjon'ny WTTC ary koa ny maha-zava-dehibe ny ETOA sy ny PATA. Anisan'ny asan'ny Sekretera jeneraly ny fitandroana ny fandanjalanjana momba ny maha-zava-dehibe sy ny andraikitr'ireto fikambanana ireto sy ireo mpikambana ao amin'ny Affiliate hafa. Ity fifandanjana ara-pahasalamana ity dia tokony ho hita taratra amin'ny haavon'ny fitantanana Organisation ihany koa. Raha tsy very fanaraha-maso ny fitantanan-draharaham-panjakana ho toy ny fikambanana eo amin'ny fitondrana, ny mpikambana mpikambana dia tokony homena fotoana mety handray anjara amin'ny fanapahan-kevitra lehibe raisin'ny fikambanana.
Steinmetz: Ahoana no hataonao ny Coalition Iraisam-pirenena amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany (ICTP) ao anaty fifangaroana. Tsy maintsy manontany anao izany aho, satria izaho no filohan'ity fikambanana ity.
Cabal: Ny fiaraha-miasa amin'ny ICTP dia manan-danja toy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny Organisation. Heveriko fa ny andraikitry ny ICTP dia zava-dehibe ao anatin'ny tolo-kevitra narosoko, ohatra, ny fanamafisana ny kalitao momba ny toerana itodiana sy ireo serivisy serivisy tsy miankina, izay mpandray anjara. Ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fizahan-tany maharitra sy tontolo iainana ary ireo singa fototra amin'ny fivoarany toy ny fanabeazana na ny marketing dia zava-dehibe indrindra. Noho izany dia hitako fa manana andraikitra lehibe mandritra ny fotoana itantananako ny ICTP raha voatendry ho sekretera jeneraly aho.
Steinmetz: Inona ny hevitrao momba ny STEP, hetsika tarihin'ny masoivohon'ny masoivoho Dho anao?
Cabal: Ny fandraisana andraikitra rehetra izay mandray anjara amin'ny fanamafisana ny fizahan-tany maharitra, izay misy fiatraikany amin'ny fanabeazana sy ny fiofanana ary mandray anjara amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika sy ny fihenan'ny fahantrana dia ankasitrahana hatrany. Ity programa ity sy ity fototra tohanan'ny UNWTO ity dia tokony hohamafisina amin'ny ho avy ary ny UNWTO dia tokony hanombatombana ny mason'ireo fanitarana fandaharana hampidirina ao aoriana.
Steinmetz: Amin'ny maha-kolombiana anao, inona ny fahitanao ny fizahantany manerantany?
Cabal: Kolombia ankehitriny dia mampiseho ny tenany ary eken'ny masoivoho iraisam-pirenena ho iray amin'ireo firenena manana ny mety indrindra manoloana ny fizahan-tany ankehitriny sy ho avy. Ny karazana vokatra fizahan-tany sy fahaiza-manao fizahan-tany izay natolotr'i Kolombia toy ny masoandro sy ny morontsiraka, ny fizahan-tany ara-kolontsaina sy manan-tantara, ny fety, ny tanàna, ny fizahan-tany ary ny fizahan-tany any ambanivohitra dia mety ho fananana amin'ny fizahan-tany manerantany. Ny fomba fijery vaovao natolotry ny fizotran'ny fandriam-pahalemana dia zavatra azo ampiharina amin'ny firenena maro misy fifandonana. Heveriko fa ity valintenin'i Colombia nanolotra ity firotsahan-kofidina ity dia taratry ny fotoana iainan'i Kolombia amin'ny toekareny, ny fivoarany ara-tsosialy sy maharitra noho ny fijerin'ny fandriam-pahalemana vaovao.
Steinmetz: Ahoana no hampitomboanao ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany ao anatin'ny rafitra UN, ao anatin'izany ny fanamby amin'ny teti-bola, ny fisolo tena ny birao sns.
Cabal: Ny fizahan-tany manerantany dia mitombo ankehitriny nefa koa manova fizahantany. Ireo fiovana dia azo jerena ao anatin'ny endrika fizahan-tany vaovao, fitakiana vaovao ataon'ireo mpizahatany ary teknolojia vaovao. Fantatry ny firenena kokoa ny fiatraikan'ny fizahan-tany ara-tsosialy sy ara-toekarena ary noho izany dia zava-dehibe ho an'ny UNWTO ny ho lasa fikambanana mavitrika sy miovaova izay mamerina hatrany ny tenany, izay mandika ny zava-misy vaovao amin'ny fizahan-tany manerantany ary koa ny fizahantany isam-paritra sy eo an-toerana. Io fahatsiarovan-tena io, mazava ho azy, dia tokony hitombo ao anatin'ny rafitry ny Firenena Mikambana ary ny fampiakarana ny tetibola dia tena ilaina mba hahafahana mampivelatra hetsika sy programa vaovao. Noho izany, nanolo-kevitra ny hampihenana ny fandaniana anatiny aho ary ny fampitomboana ny loharanom-bola ho an'ny programa sy ny hetsika. Ity fanamafisana teti-bola ity dia tokony ho tratra amin'ny alàlan'ny fampitomboan'ny mpikambana mpikambana ary koa ny mpikambana ao amin'ny Affiliate ary amin'ny alàlan'ny fitadiavana loharanon-karena amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay afaka mandray anjara amin'ny vola samihafa manamora ny fampiasam-bola amin'ny programa vaovao.
Steinmetz: Inona ny hevitrao momba ny fanambin'ny fiarovana manerantany ankehitriny?
Cabal: Ny fampihorohoroana sy ny fitomboan'ny tsy fandriam-pahalemana dia mihatra amin'ny firenena, faritra ary tanàna maro. Mazava ho azy fa io dia tsy maintsy ahin'ny UNWTO sy ny mpitarika azy. Araka ny efa nolazainay, ny UNWTO dia tokony ho mpanamora sy mpanolotsaina ireo firenena mpikambana mamaly ny filan'izy ireo eo noho eo. Fanontaniana iray tokony hamaly ny UNWTO, ohatra, ny fomba fanampiana amin'ny fotoanan'ny krizy amin'ny fomba mailaka sy haingana hanoherana ny vokatry ny asa fampihorohoroana atrehin'ireo tanàna sy faritra sasany. Ary eto no ilain'ny firenena ny Fikambanana: manome programa fampiroboroboana ary koa fampahalalana sy fifandraisana manome valiny avy hatrany ny vola azo avy aminy sy ny filany, hanomezana torohay vaovao azon'izy ireo aleha sns., Ary toy izany, manohitra ny voka-dratsy na sary mety hitranga amin'ny firenena na tanàna fanafihana mpampihorohoro. Mazava ho azy fa tsy misy fiovana haingana toy ny zava-misy ny fiheverana, ary io fiovan'ny realties io dia tokony hiarahan'ny UNWTO amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ireo firenena mpikambana ao aminy. Tokony hisy ekipa tokony hanome valiny eo noho eo ho an'ireo firenena mila izany fanampiana izany. Midika izany fa eo amin'ny laharam-pahamehan'ny fikambanana dia tokony misy programa fanampiana ho an'ireo firenena iharan'ny tsy fandriam-pahalemana na fanafihan'ny mpampihorohoro.
Steinmetz: Inona ny fijoroanao amin'ny sisintany misokatra na mihidy, visa, visa elektronika ary firenena manan-danja sasany izay mifindra amin'ny fiaraha-monina mihidy kokoa.
Cabal: Araka ny efa noresahiko tamin'ny fanontaniana teo aloha, ny UNWTO dia tokony hiasa ho mpanelanelana sy mpanolotsaina ary amin'ity sehatra ity dia tokony hiezaka ny hanafoana ireo sakana efa misy izy mba hampitomboana ny fivezivezin'ny fizahan-tany ary hamorona toeran-java-mahaliana vaovao. Imbetsaka, misy ireo sakana ireo noho ny fanaraha-maso ny sisintany sy ny adidin'ny visa izay manakana ity fiakarana ity. Eto, ny UNWTO dia tokony hiasa ho mpiara-miasa sy mpanohana mba hahafantaran'ny firenena ny mety ho fiatraikany amin'ny fananganana visa takiana amin'ny mpizahatany manerantany. Mandritra izany fotoana izany dia tokony ho mpanolotsaina ho an'ny mpizahatany izy io mba hanamorana ny fivezivezena sy hanome vaovao momba ny sakana mety sendra azy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny UNWTO dia tokony hanana andraikitra lehibe amin'ity fampandrosoana vaovao ity sy ny fampidirana an'izao tontolo izao mba hahafahan'ny mpizahatany mivezivezy mora kokoa sy mahazo tombony amin'ny teknolojia vaovao hiditra amin'ny firenena hafa, izay efa misy amin'ny seranam-piaramanidina maro amin'ny alàlan'ny visa elektronika.
Steinmetz: Inona no fijoroanao amin'ny fanekena ireo vondrona vitsy an'isa, ao anatin'izany ny indostrian'ny fizahan-tany LGBT?
Cabal: Heveriko fa ny UNWTO dia tokony ho mpanamora sy mpanolotsaina ireo Firenena mpikambana ao aminy momba ny politikam-bahoaka ary tokony ho raisina avokoa ny karazana fizahantany, vokatra samihafa amin'ny fizahan-tany na fanovana mitranga any amin'ny firenena samihafa. Amin'io lafiny io, ny fizahan-tany LGBT dia nanjary manan-danja tokoa amin'ny fandraisana anjaran'ny vokatra marobe atolotra amin'ny tsena iraisam-pirenena samihafa eran'izao tontolo izao. Heveriko fa ny UNWTO dia tokony hanana fomba fiasa feno momba io fomba fizahan-tany io, mandritra izany fotoana izany, amin'ny fanoherana sy fanoherana ireo endrika fizahan-tany izay manitsakitsaka ny zon'olombelona sy ny fikasana hanohitra ny fomba fanao tsara satria dia ny fanararaotana ara-nofo, fanondranana olona an-tsokosoko ary fampiasana ankizy, ankoatry ny hafa.
Tonga tao an-drenivohitr'i Great Britain ny karajia Expo 2017